I-Gavea Forest Nook - I-Azalea Cottage - I-Airbnb
I-Gavea Forest Nook - I-Azalea Cottage
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguAlcione
Khawucinge ngokulala kunye neekhilikithi eziculayo, isandi samanzi omlambo nokuvukela isandi seentaka, kwigumbi elitofotofo ngokupheleleyo, elihambelana ngokupheleleyo nendalo. Iintlobo eziliqela zeentaka ziqhele ukutyelela phantse yonke intsasa, ngaphezu koko, ziimitha eziyi-10 kuphela ukusuka emlanjeni.
I-Chalé Azaléia ikwindawo ye-2000 mts kwaye inegumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini etofotofo kakhulu, igumbi lokuhlambela labucala, indawo yokubasa umlilo, indawo yekofu nezimuncumuncu kunye nebhalkoni enezitulo.
Indawo efanelekileyo, yimizuzu eyi-10 kuphela yokuhamba ngemoto phakathi kweMaringá neVisconde de Mauá. Umlambo udlula ngaphakathi kwi-Inn kulula ukungena, iimitha eziyi-10 kuphela. Kwindawo ye-2000mts enengca negadi, ungasebenzisa kwaye/okanye wabelane ngefama kunye nendawo yokoja, indawo yomlilo, ikona ye-Zen kunye ne-pergola.
Sibekwe ngaphakathi kwicondominium enezindlu ezimbalwa kakhulu. Indawo ekhethekileyo kakhulu enomlambo kwipropati kwaye isondele kumbindi wedolophana yaseVisconde de Mauá kunye neMaringá. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ujabulele indalo. Cwaka kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Alcione
Siyafumaneka ukukunceda ngayo nayiphi na indlela eyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono. Sikholelwa ukuba ukuba nomntu omtsha endlwini yethu lithuba elihle lokwenza abahlobo abatsha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Visconde de Mauá